Dowladda Soomaaliya oo Denmark la gashay heshiis dib loogu soo celinayo qaxootiga. – Kismaayo24 News Agency
Dowladda Soomaaliya oo Denmark la gashay heshiis dib loogu soo celinayo qaxootiga.
by Ahmed sudani 14th June 2018 071
Dowladaha Soomaaliya iyo Denmark ayaa heshiis qarsoodi ah oo dhigaya in dadka magangalyo doonka ah ee Soomaalida ah dalka Soomaaliya dib loogu soo celin karo.
Heshiiskan oo aan si rasmi ah loo shaacin ayaa soo ifbaxay kadib markii xisbiga mucaaradka dalka Denmark uu ku eedeeyay dowlada wadankaas inay gashay heshiiskan ayna u baahan yihiin mucaaradka in la cadeeyo.Afhayeenka Xisbiga Social Democrats ee dalkaasi, Mattias Tesfaye oo la hadlay Telefishinka TV 2 ayaa tilmaamay inay u baahan yihiin caddaynta ku aadan Heshiiskaasi, iyadoo aan la soconin Heshiiskaasi, isla markaana ay jiraan dad Soomaali ah oo si qarsoodi ah loogu celiyey dalka Somalia.
Hase yeeshee Wasiirada Arrimaha Socdaalka ee dalka Denmark Inger Støjberg ayaa Farriin E-mail ku dirtay ku sheegtay in heshiiska lala galay DFS uu yahay Heshiis Qarsoodi ah, waxayna diiday inay faahfaahin dheeraad ah laga bixiyo Heshiiska qarsoodiga ee dadka Soomaalida loogu celinayo Somalia.
Qaar ka mid ah warbaahinta dalka Denmark ayaa sheegtay inay heleen Dukumenti muujinaya Hrshiiska ay labada Dowladood gaareen, taasi oo lagu xusay in Soomaalida aan haysanin Sharciga Deganaanshaha Denmark in loo masaafuriyo Somalia.
Heshiiska qarsoodiga ah ee galeen dowladaha Soomaaliya iyo Denmark ayaa ah mid afka ah waxaa uu dhigayaa in dalka Denmark ay Soomaaliya dib ugu soo celin karto muwaadinkii aan helin Dokumenti iyo aqbalaad rasmi ah.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Oo Amray in la banneeyo Garoonkii Jeenyo iyo gooba kale.
SAWIRRO:- Marwada Koowaad ee dalka oo Barnaamij indha fiiqid ah u sameysay dad danyar ah.
Kooxda Ahlu Sunna iyo Xukuumada Soomaaliya oo wali
admin 19th October 2019
Shirkada Facebooka oo Raali Galin ka bixisay Mid ka mid ah Qaladaadkii ugu Xumaa oo Abid shirkada ka dhaca Maalintii Shalay
Daawo: Madaxweynaha oo khudbad ku saabsan xaaladda Soomaaliya iyo xiriirka Suudaan ka jeediyay Jaamacadda IUA ee Khartoum